Atụmatụ: Mgbe ịhazi, ihe niile n'ọnọdụ ya | Site na Linux
Atụmatụ: Mgbe formatting, ihe niile na ya ebe
Edere isiokwu a karịa maka ndị ọrụ ọhụụ GNU / Linux, nke m bipụtara n'oge ụfọdụ gara aga na oru ngo nke anyị ga-amaliteghachi n'oge na-adịghị anya, akpọrọ Ọrụ Cepero.
Abụ m onye ọrụ Windows karịa afọ 8, ma ọ bụrụ na enwere ihe na-enye m nsogbu, ọ na-ahazi ma hazie nchekwa niile na mmemme nke m na-arụ ọrụ kwa ụbọchị mgbe nrụnye ọ bụla nke sistemụ arụmọrụ.
Otu n’ime ihe mbụ dọtara anya m GNU / Linux, bụ eziokwu na mgbe formatting mgbọrọgwụ nkebi (nke dị na Windows ga-abụ diski C :), nchekwa m nọgidere n'otu ebe yana ha na ha, ihe ọ bụla ọzọ: otu akara ngosi, otu pointer, otu akwụkwọ ahụaja na ọbụnadị otu ntọala nke mmemme m nke iji ụbọchị ọ bụla dịka ndị ahịa ozi ma ọ bụ ihe nchọgharị ahụ. Olee otú nke a si kwe omume? Azịza ya dị mfe.
Nke a bụ n'ihi na nkesa nke GNU / Linux, ntọala ndị ọrụ (Ọ gwụla ma ị kọwaa n'ụzọ ọzọ site na njikọ njikọ ihe atụ ma ọ bụ ụzọ aghụghọ ọzọ) echekwa na ndabara na folda ahụ / ulo / onye ọrụ / nke bụ nkebi ezubere ịchekwa data onye ọrụ, ihe dị ka ibe nke diski D:.
A na-echekwa ntọala ndị a na folda zoro ezo, (folda nwere oge n'ihu aha)* na ka ha wee weghachi ọzọ anyị ga-emerịrị ihe abụọ achọrọ mgbe ịhazi:
Emeghị usoro nkebi / ụlọ.
Laghachi tinye otu aha njirimara ya mere na usoro ịtọ otu / home nkebi.
N'ụzọ dị otú a, mgbe nnọkọ ahụ malitere ma anyị na onye ọrụ anyị na-abanyekarị, ihe niile na-anọgide n'ọnọdụ ya.
Ihe dị mkpa: Ọ bụrụ na ịhọrọla nhọrọ iji rịọ paswọọdụ iji debe folda nkeonwe gị (nhọrọ a ka edobere n'oge ntinye) ga-etinye otu okwuntughe na ị nwere na mbụ, ma ọ bụghị na ị gaghị enwe ikikere n'onwe gị / n'ụlọ n'agbanyeghị ma onye ọrụ ahụ bụ otu.
1 Mara ntakịrị ihe.
2 N'ịkọwa okwu a niile na obere okwu:
Mara ntakịrị ihe.
En GNU / Linux anyị nwere ike ịchọta nhazi ma ọ bụ ndị ọrụ n'otu n'otu. Ndi mmadu n'otu n'otu bu ndi a zoputara n'ime / n'ụlọ nke onye ọrụ n'ime folda zoro ezo dị ka akọwara n'elu, na ndị na-akọrọ bụ ndị na-azọpụta (dị ka mgbọrọgwụ) na folda ahụ / usr / share /.
N'ime / usr / share / Enwere folda abụọ nwere ike ịmasị ndị ọrụ: Akara ngosi y themes. Ke akpa akara ngosi na cursors na-echekwa, na nke abụọ gburugburu Gtk y Mgbachi, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
Ọ bụrụ na anyị mepụta otu folda ndị a / n'ụlọ nke onye ọrụ ma gbakwunye isi n'ihu (.icons, .ihe) iji zoo ha, ozugbo usoro malitere, ọ ga-eburu ha n'uche iji guzobe nhazi anyị.
Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta akara ngosi, mkpọ Gtk, ma ọ bụ isiokwu maka cursor ahụ, dị iche na nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịhọrọ, anyị na-etinye ha n'ime nchekwa ndị a na anyị / n'ụlọ.
N'ịkọwa okwu a niile na obere okwu:
Ọ bụrụ na anyị tinye akara ngosi anyị, isiokwu na mkpụrụ akwụkwọ n'ime folda ahụ .icons, .ihe o mkpụrụ edemede nke anyi / n'ụlọ, naanị anyị ga-enwe ike ịnweta ha, ma ọ bụrụ na anyị tinye ha n'ime otu folda ahụ mana / usr / kekọrịta, ndị ọrụ niile nke usoro a ga-enwe ohere ịnweta ha.
Ihe dị mkpa: A na-atụ aro ya mgbe niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ejiri aka mee ya, detuo akara ngosi na isiokwu dị na anyị / n'ụlọ, ebe ọ bụ na-abụkarị folda ahụ / usr / kekọrịta Ọ na-ehichapụ mgbe anyị na-usoro anyị usoro.
Elezie desktọọpụ gburugburu dị ka Gnome o KDE Ha na-arụrụ anyị ọrụ a, na -e copomi ihe ọ bụla na folda ya kwekọrọ na ya site na ngwa a raara nye nhazi desktọọpụ, mana nke a dị mma ịmara maka gburugburu ọrụ ọrụ ndị ọzọ Xfce, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ejiri njikwa windo dị ka Openbox o Fluxbox.
Ugbu a oge ọ bụla anyị tinyegharịrị, anyị ga-enwe ihe niile ebe ...
*Igosi nchekwa zoro ezo na Gnome, anyị na-agakwuru onye nyocha faịlụ ma jiri nchikota igodo Ctrl + h. Ma ọ bụ anyị nwere ike ịga na menu Lelee »Gosi / Zoo Zoro ezo faịlụ. N'okwu nke KDE con dolphin, na-eme site na iji igodo isi Alt +. (isi).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Atụmatụ: Mgbe formatting, ihe niile na ya ebe
Ime ụlọ nwere onwe ya bụ ụzọ kachasị mma iji zere ịtọlite ​​ihe niile ọzọ, ọ dị njọ na m chebere ya
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ bụ ihe niile banyere .. Ikewapu / ulo site na /
N'ihi ya, ọ dị mkpa mgbe ị wụnye, ọbụlagodi / iche n'ụlọ /
Onwere ndi tinyere / buut / usr na ndi ozo mana enwere m afo ojuju na / ulo, na gbanwee.
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere àgwà ọjọọ nke na-emeghị omenala formatting na-etinye ihe niile ọnụ na agbatiri nkebi na-ekpuchi dum disk (omume ọjọọ nke distros maka ụmụ mmadụ)
Eziokwu bụ na ọ dịkwa ezigbo mkpa iji chekwaa ọrụ ọ bụrụ na ịtinyeghachi ya. N'ezie, ịhapụ usoro ahụ dị ka ihe ọhụrụ, ụfọdụ faịlụ nhazi ga-ehichapụ.
Ọ dị oke njọ, dị ka ha na-ekwu n'okpuru, ụfọdụ distros na-eme naanị otu nkebi. Ha kwesịrị iji ndabara kewaa / ụlọ wee hapụ mgbọrọgwụ na opekempe na nhọrọ iji gbasaa, dabere na ọnụọgụ nke ngwa ndị a ga-arụnye mgbe e mesịrị, nke na-ekwesịghị ịdị ọtụtụ. Distrons dị njikere ma rụọ ọrụ site na ntinye.
A na-enwekarị njehie ikikere oge ụfọdụ na / ụlọ mgbe ị na-agbanwe distro, mana ọ dị mfe idozi (na "chown" na "chmod), mana ihe dị mkpa, dị ka ị rụtụrụ aka, bụ na data gị niile ka dị.
Ezigbo ego! Ugbu a, m maara ihe nzube nke kewara disk na / home bụ n'ihi na na ọtụtụ distros ndabara adịghị eme ka ị. Ihe siri ike ga-abụrịrị gbakọọ ole nke ọ bụla ka ọ ghara ịda.
Ndewo na nnabata na saịtị anyị 🙂
Culagbakọ bụ nsogbu, iche na i nwere 1GB RAM ma ọ bụ karịa, m ga - asị:
SWAP ma ọ bụ gbanwee ebe - »512MB
/ n'ụlọ - »Ndị ọzọ ... niile ị chọrọ
Ekele na ajụjụ ọ bụla ị nwere, ka anyị mara 😉
Ọ naghị esiri anyị ike. Nwere ike inye mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ [/] (iji nwee ntụsara ahụ) ohere n’agbata 8 na 15 Gb. Iji gbanye ebe nchekwa RAM gị okpukpu abụọ ma ọ bụrụhaala na ọ gafere 1Gb, ma ndị ọzọ maka ụlọ nkebi [/ home].
Mgbe m rụnyere Arch etinye m 20 gbs na mgbọrọgwụ (/), gbanwee 500mb na ụlọ ihe fọdụrụ.
Gaa site na ịwụnye nchịkọta m, Blender, LibreO, wdg.
Mgbe obere oge gwụrụ m mgbọrọgwụ ohere.
Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ka m ga-eme? nwalee pacman -Scc
Ga-enyocha ọ bụghị naanị oghere Pacman, mana akwụkwọ ndekọ ndị ọzọ dịka ndekọ na ihe ndị yiri ya. Site na 20Gb ọ dị obere na mgbọrọgwụ jupụtara n'ụzọ ahụ.
Ana m ekele gị nke ukwuu, ihe ndị a kọwara nke ọma dị mma maka ndị na-amaghị akwụkwọ na ndị na - agụghị akwụkwọ dịka ma ọ bụ ndị na - anaghị egosi ọdịiche dị n'ụlọ na otu ụkwụ nke Serrano ham 😀
Ekele, na-ekele gị nke ukwuu.
Ruo ugbu a niile obi ọjọọ ... site na nkewa / ụlọ site na / anyị na-echekwa nhazi anyị na faịlụ onwe anyị. Ugbu a ajụjụ m nwere ụzọ iji zọpụta ngwa ndị arụnyere?
Daalụ maka ọtụtụ anwansi !!
Enwere m ajụjụ mgbe niile ma ruo ugbu a ọ na-adabara m ịchọ azịza, ekele maka isiokwu a.
Amaara m ma ghọta etu o si baa uru inwe folda .icons na .themes na HLỌ ANY,, mana kedu ihe na - eme na akara ngosi Faenza nke arụnyere na ppa? Akara ngosi na isiokwu site na ppa na-etinye mgbe niile na / usr / share.
Enwere ụzọ ịgbanwe ebe a ga-etinye Faenza, Numix, NitruxOS, wdg. kedu mgbe awụnyere site na ppa?
Ugbokodo 148 dijo
kedu ezigbo tuto
teknụzụ: Nnyocha na ngagharị na-eweta Blackberry BBX ya.